३८ जनालाई तत्काल मृत्युदण्ड, भारतभर हंगामा — Imandarmedia.com
३८ जनालाई तत्काल मृत्युदण्ड, भारतभर हंगामा
काठमाडौ। एक भारतीय अदालतले २००८ मा अहमदावाद सहरमा श्रृंखलाबद्ध ब’म वि’स्फोट गराउने ३८ जना मुुश्लिम पुुरुषलाई मृ’त्युद’ण्डको सजाय सुनाएको छ।
यसका साथै अन्य ११ लाई आमरण जेल सजाय सुनाएको छ। उक्त ब’म ह’म’लामा ५० जनाको ज्यान गएको थियो। १६ वटा श्रृंखलाब’द्ध वि’स्फोटले पश्चिमी राज्य गुजरात नराम्ररी हल्लिएको थियो।
यो सहरमा सन् २००२ मा हिन्दु र मुश्लिम बीच दंगा भड्किएको थियो। उक्त दंगामा हजारौँ मारिएको र यसको बहुसंख्यक मुश्लिम रहेका थिए। सन् २००८ को जुलाई २६ मा भएको विस्फोटको जिम्मेवारी भारतीय मुजाहिद्दिनले लिएको छ।
सीएनएनका अनुसार न्यायाधीस ए. आर. पटेलले फासीको सजायको लागि दवाव आएपछि यो सजाय सुनाएका हुन्। यो दुर्घटनालाई दुर्लभ मध्येकै दुलर्भ मानिएको छ।
जसमा निर्दोषहरुको समेत ज्यान गएको थियो। प्रतिवादी वकिलले आफूले उच्च न्यायालयमा अपिल गर्ने बताएका छन्। हामीले नरम खालको सजायका लागि आग्रह गरेका थियौँ।
किनकी उनीहरुले १३ वर्ष भन्दा बढिको अवधि जेलमा बिताइसकेका छन्, खालिद शेखले बताए। तर अदालतले उनीहरु मध्येका धेरैलाई फाँसीको सजाय सुनाएको छ। हामी निश्चित रुपमा अपिल गर्नेछौँ।
अमेरिकी राज्य विभागले सन् २०११ मा भारतीय मुजाहिद्दिनले पाकिस्तानसँग महत्वपूर्ण सम्बन्ध भएको जनाएको छ र भारतभरी सन् २००५ देखि दर्जनौँ ब’म आ’क्र’मणका लागि जिम्मेवार भएको जनाएको छ।
यसले सयौँ सर्वसाधारणको मृत्युसमेत भइसकेको छ। यसले सन् २००८ मा मुम्बई आ’क्र’मणको लागि सहयोगी भूमिका पनि निर्वाह गरेको थियो जसमा १६० मानिसको मृ’त्यु भएको थियो।
तेस्तै, भारतमा केही समयदेखि मुस्लिमहरुको पहिरन ‘हिजाब’का कारण विवाद चर्किएको छ। यो विवादमा सिख फर जस्टिस नामक संगठनका प्रमुख गुरपरवंत सिंह पन्नुले मुस्लिमहरुलाई भारत फुटाउन आह्वान गरेका छन्।
भारतले किख फर जस्टिस नामक यो संगठनलाई आतंकवादी संगठन घोषित गरेर प्रतिबन्ध लगाएको छ। पन्नुले भारतका मुस्लिमको नाममा एउटा भिडियो जारी गरेका छन्।
यो भिडियोमा उनले मुस्लिमहरुलाई हिजाब अभियान सुरु गर्न र आफ्नो लागि छुट्टै देश उर्दिस्तान बनाउन आह्वान गरेका छन्। उनले आफ्नो संगठन पनि छुट्टै देश खालिस्तानको लागि लडिरहेको बताउँदै मुस्लिमहरुको उर्दिस्तान बनाउने अभियानको लागि फण्डिङ गर्ने बताएका छन्।
पन्नुले मोदीको भारतमा हिजाबलाई प्रतिबन्ध लगाइएको बताउँदै भने ‘भारतमा २०० मिलियन मुस्लिम बस्छन्। आज हिजाब छ भोलि यो अजान नमाज र कुरान हुनेछ।
मोदीको भारत हिन्दू राष्ट्र बन्न चाहन्छ। पन्नुले मुस्लिमहरुलाई हिजाब रिफरेन्डम अभियान सुरु गर्न र यसको माध्यमबाट उर्दिस्तान नामको नयाँ देश बनाउन आह्वान गरे।
सिख फर जस्टिस खालिस्तानी संगठन हो जसको मुख्यालय अमेरिकामा छ। २०१९ मा भारतले यो संगठनलाई गैरकानुनी घोषणा गरेको थियो। यो संगठनका सदस्य भारतीय जाँच एजेन्सीको राडारमा छन्।
तेस्तै, आफ्ना बलात्कारी श्रीमानलाई सजायबाट बचाउनका लागि एक महिलाले पीडित युवतीलाई आफ्ना श्रीमानसँग बिहे गराइदिएर आफ्नी सौता बनाइन्। उनले गहिरो षड्यन्त्र अनुसार पीडित युवतीलाई ललाइफकाइ आफ्ना श्रीमानसँग बिहे गराइदिएकी थिइन्।
बिहे गराइदिएपछि पीडित युवतीले पुलिसमा उजुरी गरिनन्। बिहे भइसकेपछि भने पति र पत्नी मिलेर पीडित युवतीलाई प्रताडित गर्न थाले। आरोपी पति र उनकी पत्नीले पीडित युवतीलाई गालीगलौज गर्ने गर्थे।
यसबाट दिक्क भएपछि पीडित न्यायको लागि अदालत पुगेकी छिन्। मध्य प्रदेशको भोपालका यी आरोपी पति रेलवेमा तैनाथ थिए। उनलाई बलात्कारको आरोपबाट बचाउन पत्नीले बलात्कार पीडितसँग पतिको बिहे गराइदिएकी थिइन्।
बिहेपछि भने पति पत्नी दुवैले ती युवतीलाई आफ्नो साथमा राख्न अस्वीकार गरे। दिक्क भएकी पीडित अदालत पुगिन्। भारतीय मिडियाका अनुसार अदालतको आदेशपछि आरोपी पतिविरुद्ध बलात्कारको मुद्दा चलाइएको छ।
तेस्तै उनकी पत्नीविरुद्ध धोकाधडीको मुद्दा चलाइएको छ। पुलिसका अनुसार पीडित २५ वर्षकी युवती निजी कम्पनीमा काम गर्छिन्।२ ०१८ मा पीडित युवती र आरोपी दशरथ सतालेको भेट भएको थियो।
दशरथले उनलाई प्रेममा फसाएर शारीरिक शोषण गरे। पछि युवतीले दशरथ विवाहित भएको थाहा पाइन्। उनी दशरथ विरुद्ध बलात्कारको मुद्दा हाल्न पुलिसमा जान खोजिन्।
त्यसपछि दशरथकी पत्नी विनिताले आफूले नै उनीहरुको विवाह गराइदिने र पीडितलाई सौताको रुपमा स्वीकार गर्ने बताइन्। बिहेको कुरा आएपछि ती युवती राजी भइन्। दुवैको एक मन्दिरमा बिहे भयो।
बिहेको केही समयपछि दशरथले युवतीलाई आफूसँग राख्न अस्वीकार गरे। त्यसपछि पीडितले अदालतमा उजुरी दिइन्। अदालतको आदेशपछि पुलिसले दुवै आरोपीविरुद्ध मुद्दा अगाडि बढाएको छ। तर, आरोपीहरु गिरफ्तार भने भइसकेका छैनन्।